प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको प्रश्न- डा. केसीको कात्रो पठाउने तयारी हो? – AayoMail
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको प्रश्न- डा. केसीको कात्रो पठाउने तयारी हो?
आयाेमेल संवाददाता २०७७ असोज २१ गते १४:५२
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै २४ दिनदेखि अनशनमा रहेका डा.गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
डा.केसीले उठाएका जायज आवाजलाई सम्बोधनमा ढिलाइ नगर्न कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी समेत दिएको छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले केसीको अनशन २४ दिन पुग्दासम्म वार्ता समितिसम्म गठन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग गम्भीर प्रश्न, डा. केसीसँग कुरै नगर्ने बरु कात्रो पठाउने तयारी हो?’
प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन।
‘कुनै बेला कमरेड प्रचण्डहरुको बन्दुकको विद्रोहलाई कटु आलोचना गर्नुहुन्थ्यो त्यो स्वभाविक थियो,’ उनले भनेका छन्,‘अब अनशन जस्तो शान्तिपूर्ण सत्याग्रहलाई समेत सुन्न अस्वीकार्य गर्दै हुनुहुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक चरित्रको हुनुमा फरक हुन्छ ? यो सन्देश दिन चाहनु भएको हो ?’
नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहेको बेला केसी अनशन बस्दा कतिपय मागहरु पूरा गरिएको उनले दाबी गरेका छन् ।
सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश र संवादमार्फत केसीले उठाएका मागहरु पूरा गरेको शर्माले बताएका छन्।
प्रवक्ता शर्माले शान्तिपूर्ण अनशन गरिरहेका डा.केसीको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई लोकतान्त्रिक संस्कार नरहेको आरोप लगाएका छन्।
‘विगतमा पूरा गरिएका माग एकातर्फ उल्टाउनु भयो, अर्कोतर्फ नयाँ सन्दर्भमा अघि सारिएका मागबारे संवादमार्फत समाधान खोज्ने लोकतान्त्रिक संस्कार यहाँमा भएन्,’ शर्माले भनेका छन्।
सत्याग्रहीमाथिको दुव्र्यवहार सत्ताको अहंकारदेखि कम्युनिष्टतन्त्रको मनोविज्ञानलाई पुष्टि गरेको शर्माको भनाइ छ । डा.केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको भन्दै तत्काल वार्ता गर्न उनले सुझाव दिएका छन्।
‘वार्ता नगर्ने बालुवाटारे बालहठ तपाईंलाई महंगो पर्नेछ प्रधानमन्त्रीज्यू,’ चेतावनी दिँदै उनले भनेका छन्, ‘हेक्का रहोस् लोकतन्त्र भर्सेस कम्युनिष्टतन्त्रमा अन्ततः जीत लोकतन्त्रकै हुनेछ। डा.केसीको जायज आवाजलाई सम्बोधनमा ढिलाइ गर्ने गम्भीर भुल किमार्थ नगरियोस्।’